Ukhenketho lwefektri-Hebei Kenuo Iimveliso zerabha ezinzileyo, Ltd.
Nge-1 ka-Okthobha i-2015, isityalo esitsha saseKenuo sagqitywa saza safakwa kwimveliso, enesikali esikhudlwana, ucwangciso olusengqiqweni kunye namaziko agqityiweyo ngokuthelekiswa nomzi-mveliso omdala, ukugqitywa kwamanqaku amatsha esityalo iKenuo esihambisela phambili oomatshini bokuvelisa, Ukuzenzekelayo kunye nolawulo lwala maxesha, kwaye kubeka isiseko esiluqilima kwinkampani yokuphucula umgangatho weemveliso kunye nophuhliso lwexesha elide, kwaye kongeze amandla amatsha kunye nokufaka amandla amatsha kulo lonke ishishini, elibalulekileyo kwimbali ikhampani.
Kule minyaka idlulileyo, irabha yeKenuo ibambelela kwifilosofi yeshishini "yomgangatho wokuqala, umthengi kuqala" ngokuthatha isayensi kunye netekhnoloji njengemveliso yokuqala kunye nenjongo yeqhinga lokunceda abantu njengeyona nto iphambili, ezinikele kwinkonzo yoluntu. , Obusemagqabini ubunjani, iimveliso ezinobungqongileyo, uyilo lwefashoni kunye nokwandiswa kokukhetha kwaye kuye kwamkelwa ngokubanzi luluntu. Umgangatho bubomi beshishini, inkampani ibambelela kubaluleke kakhulu ekulawuleni umgangatho weemveliso, eneqela labasebenzi bolawulo lomgangatho wobungcali, kwaye ixhotywe igumbi lokuvavanywa kwemveliso, igumbi lokufumanisa kunye nelabhoratri, iyaqhubeka kwimveliso esemgangathweni, kwaye ngokungqongqo iphumeza imigangatho yesizwe, imigangatho yoshishino kunye nemigangatho yamashishini, ukuqinisekisa umgangatho weemveliso. Kwangelo xesha, inkampani ikwabeka ngokubonakalayo ubudlelwane obuzinzileyo bexesha elide kunye namaziko ophando lwenzululwazi, ukuze ibambe ulwazi lwentengiso kunye nolwazi lobuchwephesha, kunye nokuqinisekisa ukuba iimveliso zenkampani zinokumiliselwa ngokuqhubekayo, kwaye zihlangabezane neemfuno zomsebenzisi ubuninzi. Ngo-2015, inkampani yadlulisa uphicotho lweZiko loLwazi lweMigangatho ye-Hebei, eyayilinganiswe njenge "iyunithi eyanelisayo ebeka ingqalelo kumgangatho kwaye igxininise ingqibelelo".
Ngo-Okthobha u-2015, inkampani ipasile isatifikethi senkqubo yolawulo lomgangatho we-GB / T19001-2008, yafumana isatifikethi senkqubo yolawulo lomgangatho, yomeleza ulawulo lomgangatho wenkampani, kwaye yonyusa ulwazi lomgangatho wabasebenzi, ukuze umgangatho wemveliso ukhuselwe ngokufanelekileyo , kwaye iimveliso zenkampani zikwindawo engenakoyiswa kukhuphiswano lomgangatho.